शिक्षा र अध्यात्म : समायोजनको खाँचो | चितवन पोष्ट
शिक्षा र अध्यात्म : समायोजनको खाँचो
जीवनको मेरूदण्ड भनौँ या जीवनजगत्को सुमेरू, जे भने पनि आखिर त्यो भनेको अन्तश्चेतना नै रहेछ । कथञ्चित् त्यसको बिर्को खुल्नै पाएन, कतै खुलिहाले पनि अन्धकाररुपी चक्रवातले ठ्याप्पै बिर्को लगाइदिए जीवन जीवनजस्तो हुनै नपाई त्यसै ओइलाउँदो रहेछ । त्यस्तो अन्तश्चेतनाको द्वार खोल्ने भनेकै सत् शिक्षा, सत् संस्कार र सत् पात्रहरुको सङ्गत नै मुख्य रहेछ । त्यसलाई पुनर्बल र सृजनशील तुल्याउनमा अध्यात्मसहितको शिक्षा मुख्य कडी बन्ने रहेछ । अध्यात्म ज्ञानसहितको नैतिक शिक्षाले मात्रै ज्ञानोत्पादन गर्न सक्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई त्यसबाट विमुख तुल्याइँदा शिक्षा नै एक किसिमले विकलाङ्ग बन्न गएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
अझ खुलेरै भन्दा संस्कार, संस्कृति, सिङ्गो मानवीय जीवनपद्धति र अध्यात्मसँग जोडिएको संस्कृत भाषाप्रति नै विद्वेष राखी त्यसलाई आधारभूत तहमा समेत टिक्न नदिने जस्तो निकृष्ट व्यवहार आज हाम्रा निम्ति अभिश्राप बन्न गएको छ । प्रविधिमाथि जोड दिनुको अर्थ अन्तश्चेतनाको द्वार खोल्ने आध्यात्मिक ज्ञानलाई बन्द गर्नु र यसलाई अलग गरेर शिक्षा दिनु भन्ने पक्कै होइन, बरू आध्यात्मिक ज्ञानलाई प्रविधिसँगै जोडेर शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेचाहिँ मह¤वपूर्ण कुरा हो । प्राविधिक ज्ञान दिने बहानामा भनौँ या कुनै एउटा पराया भाषालाई मात्र ज्ञान र व्यवहारको उत्कर्ष ठान्दाका परिणाम आज समाजले भोगिरहेको छ । नैतिकतामा खडेरी परेको संस्कार, संस्कृति र हाम्रा सुन्दर सांस्कृतिक धरोहरहरु धराशायी बन्न थालेकाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट हुन थाले पनि अझै यसलाई जगेर्ना गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिएको छैन । यसैले पनि आज व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार र अत्याचारले उत्कर्षता ग्रहण गर्दै गएको छिपाएर छिप्दैन ।
अहिले मानिस कानुनलाई गन्दैन र समाजको आँखा छल्न पाए ऊ सम्पत्ति लुट्न, अपहरण, बलात्कार, हत्या र हिंसा गर्न अलिकति पनि अप्ठयारो मान्दैन । मातापिता, गुरू, अतिथि, वृद्ध र मान्यजनहरुप्रति गर्नुपर्ने आदरभाव चूर्णचूर्ण बन्दै गएको छ ।
यसको मूल जड भनेकै हामीले प्रदान गरिरहेको बोक्रे शिक्षा हो भन्नेमा सायदै द्विमत रहला । न हिच्किचाईकन भन्नुपर्दा आध्यात्मिक शिक्षाले प्रदान गरेको ईश्वरीय अस्तित्वमाथि ग्रहण लाग्दा नै सारा ज्ञानका पक्षहरु पक्षाघातयुक्त बन्न गएका हुन् ।
यसर्थ, हामीले अब शिक्षालाई अध्यात्मसँग जोड्नुपर्छ । त्यति गर्न नसकिएका स्थितिमा कम्तीमा पनि नीतिशिक्षाले दिएका ज्ञानका विषयहरुबारे सूक्ष्म ज्ञान दिनुचाहिँ अनिवार्य नै भइसकेको छ । त्यसलाई पाठ्यक्रममै समावेश गरी तदनुरुपको उद्देश्य हासिल हुने खालका पाठहरु समावेश गर्नैपर्ने भएको छ । अझ यसलाई सबल तुल्याउन हरेक अभिभावकहरुले आप्mना सन्तति र समाजका अगुवाहरुले आप्mना समाजका सदस्यलाई सुसंस्कारयुक्त व्यक्तित्व तुल्याउन पनि युवापुस्ता र नवोदित पुस्तालाई समेत आप्mनो संस्कृति र संस्कारको ज्ञान, प्रशिक्षण र त्यसको पर्याप्त अभ्यास गराउनमा आपूmलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
अब अरु कुनै दोस्रो लोकका मानिस आएर हामीलाई सत्मार्ग देखाउने हैनन्, बरू उल्टै हाम्रो संस्कार र सभ्यतामा खलल पु¥याउने हुन् । उनीहरुले हाम्रा संस्कृति, संस्कार र सम्पदाहरु औधी मन पराएर अवलम्बन गर्न थालिसकेको अवस्था छ । हो, उता उनीहरुले हाम्रा सत्ज्ञान र संस्कार ग्रहण गरी आर्ष सभ्यतायुक्त सभ्य र समुन्नत जीवन जिउन थालिसके । तर, हामी उनीहरुका तिनै विकृत आहार, विहार, पोसाक, छाडा र विकृत संस्कार र संंस्कृति अवलम्बन गर्ने प्रयत्नमा जुटिरहेका छौँ । यसले हामीलाई पथभ्रष्ट तुल्याइरहेको छ । अब भोलि हामीले हाम्रा सन्ततिलाई पुर्खाको संस्कृति, संस्कार, ज्ञान र गौरव योचाहिँ हो भनेर के दिने ? के देखाउने ? यसर्थ, हामी रित्तिन थालेका छौँ ।
यसर्थ, अब हामीले आप्mनोपनको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नमा जुट्नैपर्ने बेला आइसकेको छ । ढिला गरिएपछि सच्चिने र सच्याउने अवसरसमेत प्राप्त हुननसक्ने परिस्थिति आउने निश्चित छ । हाम्रा आर्ष सभ्यताका सूचक संस्कृत भाषासँग जोडिएका सारा सम्पदाबाट हामीलाई च्युत गराइसकिएको परिस्थिति छ । अब पनि नजागे हामी कहिले जाग्ने ? भलै, हामी अहिले नैे संस्कृत सिक्न र बालबच्चालाई पनि सिकाउन सम्भव नहोला । तर, यसलाई नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेर तयार पारिएका ग्रन्थहरु पढ्न र मनन गर्न सक्छौँ । यस्ता अध्यात्मयुक्त नीतिकथा, संवाद, एकाङ्कीहरु अध्ययन गर्न र गराउन सक्छौँ । वैदिक वाङ्मयका सुललित ज्ञानहरु प्रदान गर्न सक्छौँ ।
जसले हामीलाई साँचो बोल (सत्यं वद), मीठो बोल (प्रियं वद), आमालाई भगवान् सम्झ (मातृदेवो भव), पिता र अतिथिलाई भगवान् नै सम्झ (पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव), सदा सर्वदा अध्ययनशील बन (स्वाध्यायान्माप्रमदः), अनिन्दित कार्य मात्र गर । विद्याबाट अमृतमय ज्ञान प्राप्त हुन्छ । अन्धकार भए ठाउँमा ज्ञानरुपी ज्योति फैलाऊ, सधैँ उत्साही बन र कर्मलाई नै भगवान्को पूजा सम्झेर सदा कर्ममा नित्य निरन्तर क्रियाशील भइरहू । सत्कर्म गर्नेले नै दिगो सफलता र ईश्वरत्व प्राप्त गर्दछ । मानिसको मुख्य धन भनेकै उसको सत्चरित्र भएकाले असल चरित्र निर्माणमा आपूmलाई समर्पित गर भन्ने शिक्षा दिन्छ । मातापिता र गुरू भनेका जिउँदा देवता हुन् । गुरूभन्दा उचित भरणपोषण र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने पिता सयगुणा महान् हुन्छन् । मातृवात्सल्य दिएर हुर्काउने आमा पिताभन्दा हजारौँ गुणा महान् हुन्छिन् भन्ने शाश्वत सत्यको ज्ञान दिन्छ । त्यसैले मातापिता, गुरू र मान्यजनप्रति सदा कृतज्ञभाव राख । यस्तै सन्तोष नै खुशीको महान् स्रोत हो । सुखदुःख चक्रझैँ आइरहन्छ । यसबाट प्रभावित बन्नुहुन्न । यसले अर्काको धनलाई माटाको डल्लो र पराया स्त्रीलाई आमा सम्झ आदि ज्ञान मात्र दिँदैन, स्वर्गको आश र नर्कको त्रास देखाएर मान्छेलाई सत्कर्म गर्न सदा अभिप्रेरित गर्दछ ।
यसले ईश्वर, कानुन र मानिसका नजर नपुगेका ठाउँमा पनि ईश्वर र उनको दिव्यदृष्टि परिरहने हुनाले निन्दित कर्म नगर्न र गरे कुनै न कुनै कालखण्डमा त्यसको दण्ड भोग्नैपर्ने हुँदा त्यस्ता दुष्कर्महरुबाट परै रहन सल्लाह दिएको छ, जसले अरुको भलाइ गर्नुजस्तो ठूलो पुण्य र अरुको कुभलो हुनेजस्तो निकृष्ट कर्म कुनै छैन भन्ने ज्ञान दिई अरुको भलाइमै समर्पित हुन सल्लाह दिन्छ ।
यस्तो अमोघ शिक्षा पाउनबाट आजका पुस्तालाई वञ्चित तुल्याउन हुन्न । संस्कृत भाषा नै नजाने पनि नेपाली भावानुवाद गरिएका ग्रन्थहरु सर्वत्र उपलब्ध छन् । त्यस्ता सामग्रीहरु अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ । त्यस्ता ग्रन्थ हामीले पढेको देखेमा हाम्रा परिवारका अरु सदस्य हुँदै ससाना बालबालिकाहरुमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्ने निश्चित छ । यसर्थ, अरुलाई सुधार्नुछ भने अब हामी नै त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अरुले गरेन भनेर रोइला गाएर बस्नुको कुनै अर्थ छैन । अरुलाई सुुसभ्य, सुसंस्कृत र असल तुल्याउन हामी स्वयं पनि बदलिनु जरूरी छ ।
वस्तुतः भविष्यलाई सुखद बनाउन वर्तमानलाई सही दिशामा हिँडाउनु अपरिहार्य छ । भोलिको सुन्दर नेपालका निर्माता आजका बालबालिकाहरु नै भएकाले तिनलाई नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा दिएर भ्रष्टाचार, दुराचार तथा व्यभिचाररहित सभ्य एवम् समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न सकिन्छ, तर सर्वप्रथम यसमा अभिभावक, गुरूजन र समाजका प्रतिष्ठित कहलिएका मान्छेको नैतिक चरित्र नै आदर्शमय एवम् अनुकरणीय बन्नु अपरिहार्य छ ।